Nepal Mamila | प्रचण्डप्रति ओलीको कटाक्षः 'जसका लागि जिम्मा जमानी बसेर भोट मागेँ, उही फुत्केपछि के गर्नु ?' - Nepal Mamila प्रचण्डप्रति ओलीको कटाक्षः 'जसका लागि जिम्मा जमानी बसेर भोट मागेँ, उही फुत्केपछि के गर्नु ?' - Nepal Mamila
प्रचण्डप्रति ओलीको कटाक्षः ‘जसका लागि जिम्मा जमानी बसेर भोट मागेँ, उही फुत्केपछि के गर्नु ?’
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न विपक्षीलाई साढे तीन वर्ष लागेको भन्दै अब बन्ने एमाले नेतृत्वको सरकार कसैले ढाल्न नसक्ने बताए । मंगलबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अब बन्ने सरकार ढाल्छु भनेर पनि नसक्ने दावी गरेका छन् ।
ओलीले भने, ‘नेकपा एमालेको सरकार साढे तीन बर्षमा बल्ल ढाले । पहिला पनि एकपटक ढालेका थिए । पहिले सरकार बनेको नौ महिनामा ढालेका थिए । अहिले साढे तीन बर्ष लाग्यो, अब बनेपछि ढाल्छु भनेर कसैले नचिताए हुन्छ ।’
उनले जनतालाई एमाले सरकारले गरेका काम देखाउन आग्रह गरेका छन् । राम जानकीको सालिक बनाउनेदेखि लिम्पियाधुराको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा बनाउने एमाले नै भएको बताए । उनले माडीको विकास भएन भनेर आफू प्रचण्डको जिम्मा जमानी बसेर जिताएको तर प्रचण्ड नै फुत्किएको टिप्पणी पनि गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘सोचेजति माडीको विकास भएन । माडीको जनप्रतिनिधिको मनमा । म पनि आएर भोट मागेँ जिम्मा जमानी बसेर, म जमानी बसेको उही फुत्केपछि के गर्नु ? जसको जमानी बसेको थिएँ उही फुत्कियो ।’
अब माडीको विकास आफूले गर्ने दावी समेत गरे । ‘अव यस ठाउँको विकासको जिम्मा म आफै लिन्छु । म चुनावमा लड्न आँटेछ भन्ने नठान्नुहोला, म देशभरी कहाँकहाँ लडु ? म चुनाव लड्न आउने होइन तर विकास यो ठाउँको गरिन्छ’, ओलीले भने ।
उनले माडीबाट चुनाव जितेकाहरुलाई देश र जनताको चिन्ता नभएको बताए । उनले अयोध्यापुरीको विकासले नेपालमै नमुनाको काम गर्ने समेत बताए ।